News and Events – NMDC
NMDCer လေးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ NMDUSU ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ တတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Workshop အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Facilitators တွေကို မိတ်ဆက်မပေးခင် Day3ရဲ့ ပြုလုပ်သွားမယ့်ပုံစံလေးကို ဦးစွာ ပြန်လည်ရှင်းပြလိုပါတယ်။ Day3မှာတော့ ZOOM Platform ကို အသုံးပြုပြီး NMDC ကျောင်းသားကျောင်းသားများ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမယ့် Breakout Sessions ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ “ခေါင်းစဉ်လေးခုနဲ့ Workshop လေးခု” တစ်ပြိုင်နက်ရှိမှာ [...]
Monday June 22nd, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
NMDCSU ကနေပြီးတော့ ဦးဆောင်ကျင်းပသွားမယ့် NMDC ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Virtual Student Forum နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ NMDC ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံး ပါဝင်လို့ရမယ့် Online Event ကြီးဖြစ်တဲ့ အပြင် NMDCSU အတွက်လဲ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီ Forum ကိုတော့ “Redefining Career Aspirations for Post-COVID Myanmar” ဆိုတဲ့ Theme ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ Digital [...]
Friday June 19th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံအမတ်ကြီး Ms. Andrea Faulkner တို့ Video Conferencing ဖြင့်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး၏ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချက်အရ Study with Australia Campaign- Australian Online Higher Education Showcase- (FREE Australia Online Short Courses) သင်တန်းများကို ပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ အကြောင်းကြားလာပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် hashtag [...]
Tuesday June 16th, 2020 By NMDC Editor News, News and Events Comments Off
Wednesday May 20th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
Digital Tools တွေ ခေတ်စားလာတာနဲ့ အမျှ Video Conferencing ကိုလဲ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ Online Meeting, Training, Webinar စတာတွေအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချလာကြပါတယ်။ ပညာရေးပိုင်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Video Conferencing ဟာ E-learning ရဲ့ အဓိက ကဏ္ဌတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Synchronous (အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သင်ကြားရေး) အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး ဆက်သွယ်ရေး (Communication) ကောင်းမွန်မှုကစပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု (Collaborativeness)၊ တုံ့ပြန်နိုင်မှု [...]
Monday May 18th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
COVID -19 သည် ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း WHO က သတ်မှတ်ကြေညာထားပါသဖြင့် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် Internship (၂)လနှင့် (၆)လ ကြာ ပြုလုပ်မည့် Internship ကာလများကို ပြောင်းရွှေ့ထားပါကြောင်းနှင့် Internship ပြုလုပ်မည့် ရက်ကို ထပ်မံကြေညာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Monday March 30th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
NMDC ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ခင်ဗျာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေညာခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ Coronavirus ဟာဆိုရင် အထိအတွေ့ တွေကနေ တစ်ဆင့် အဓိကကူးဆက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကူးဆက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်… ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အနေဖြင့် – နေမကောင်း ဖြစ်သူများကို အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ပါ။ – မိမိသည်လည်း လက်မဆေးဘဲ မိမိမျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို ထိမိခြင်းမှာရှောင်ပါ။ – နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလျှင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ – လူထူထပ်သောနေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ – ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ – တစ်ခုခုကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်းနှင့် အပြင်မှပြန်လာတိုင်း ရေနှင့်ဆပ်ပြာကို အသုံးပြု၍ [...]
Tuesday March 17th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
Wednesday March 11th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
Business Sector အသီးသီးမှ လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် NMDCမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်- မင်္ဂလာပါရှင်.. B.A. Tourism မှ BTHM Program ကို ပြောင်းလဲခဲ့တာ ၃ နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ယခုနှစ်မှာတော့ BTHM 1st Batch မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မေလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထိ အလုပ်သင် ( ၆ လ ) ဆင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ အလုပ်သင် ဆင်းနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ [...]
Wednesday March 11th, 2020 By NMDC Editor News, News and Events Comments Off
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ….. နေ့လည်ခင်းလေးတစ်ခုကို ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်သွားအောင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ တွေ့ရမယ်။ အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြမယ်။ ဂျပန်ရိုးရာတွေ လေ့လာပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်တွေလည်း ရမယ်ဆိုရင်ရော? မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက လူငယ် ၂၈ ဦးဟာ IDFC နဲ့အတူတူ Kyoto, Mandalay, Yangon မြို့တွေမှာ Social Entrepreneurship/Tourism/ Tradition and Globalization ခေါင်းစဉ်အသီးသီးအောက်မှာ သူတို့ရဲ့ Learning Journey ကို စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီခရီးမှာ သူတို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို တင်ပြဖို့နဲ့ [...]
Tuesday February 25th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
မင်္ဂလာပါ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအစီအစဉ်ကြီးကို Coca-Cola မှယူဆောင်လာပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့အားလုံးပဲ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Coca-Cola Next Generation Leaders Program ရဲ့ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ယခုချိန်မှစတင်ပြီးလက်ခံတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Next Generation Leaders Program ကနေ အောက်ပါဌာနများအနက် _ • Sales • Commercial • Finance • Supply Chain – Logistics • Supply Chain – Manufacturing (For Engineering Students Only) မိမိစိတ်ဝင်စားရာဌာနများကိုရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးဘွဲ့ရခါစ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအများဆုံး ( [...]
Thursday February 20th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ပေးမယ့် NMDC ရဲ့ သူရဲကောင်းများအားလုံး NMDC နဲ့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေ၊ ရေသန့်ဘူးခွံတွေ၊ အမှိုက်တို အမှိုက်စတွေကို ရှင်းလင်းရင်း ပိုမိုသန့်ရှင်းသာယာတဲ့ Campus Life ကိုရရှိဖို့ အတွက် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မယ့် အချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ 😇 ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Environmental Awareness နဲ့ Conservation အတွက် Clean NMDC လို့ ခေါ်တဲ့ Campus Clean-up Campaign ကို NMDCSU ကနေ ဦးဆောင်ပြီး [...]
Friday January 31st, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ဆိုင်ရာ ‘လ’အလိုက် ကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်တွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်သက္ကရာဇ်ကို သိပ်အသုံးပြုလေ့မရှိဘဲ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကိုသာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို သိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ သက္ကရာဇ်ဟာ ၁၃၈၁ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ တပို့တွဲလကို ရောက်ပါတော့မယ်။ တပို့တွဲလပြည့်နေ့သည် ခရစ်သက္ကရာဇ်နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ဟာ ထမနဲထိုးပွဲဖြစ်သလို မြတ်စွာဘုရားရှင်တွေက ရဟန်းတော်တွေကို သြဝါဒ ပါတိမောက် ပေးတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ NMDC [...]
Tuesday January 21st, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
Monday January 20th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off
Friday January 17th, 2020 By NMDC Editor News and Events Comments Off